Burcadbadeeda oo siidaayay markab u kiraysnaa ganacsato reer Somaliland oo ay madaxfurasho u haysteen. – Radio Daljir
Abriil 12, 2012 12:00 b 0
Bosaso, Apr 12 -Kooxaha burcadbadeeda Xeebaha Soomaaliya ayaa siidaayay markab ganacsi oo laga leeyahay dalka Imaaraatka Carabta oo muddo sadex bilood ahi ay afduub u haysteen.
Markabka MV-leila oo laga leeyahay dalka Imaaraatka Carabta ayaa muddo todobaadyo ah afduub waxaa loogu haysatay xeebaha degmada Xaafuun ee gobolka Karkaar, ka hor inta aysan burcadbadeedu kasoo dhaqaajin xeebaha Hobyo iyo Xarardheere.
Mid ka mid ergada reer Somaliland ee siidaaynta markabka u joogay magaalada Boosaaso oo diiday in magaciisa la xigto ayaa u xaqiijiyay Radio Daljir siidaynta markabka, isagoona sheegay burcadbadeeda in lasiiyay lacag gaaraysa 250,000 oo doolar, halkii markii hore dalabkooda madaxfurasho uu ahaa lacag dhan 2-milyan oo doolar.
21-kii bishii Febraayo ee sanadkan ayay ahayd markii ay burcadbadeedu afduubteen markabkan, markabka ayaa xiligaasi ku wajahnaa dekedda magaalada Berbera ee maamulka Somaliland.